Nhau - Mukohwi Nzungu Groundnut Digger Machine
Iyo yese process yekukohwa nzungurakakamurwa kuita nhanho huru mbiri: nhanho yekutanga uye yechipiri.Danho rekutanga rinoshandisa kuchera, kubvisa ivhu, nekuisa mabasa ekunhonga nzungu., kuchenesa uye kuunganidza michero.Kukohwewa kwenzungu kwezvikamu zviviri kunongoda mhando mbiri dzemichina: yekukohwa nzungu neyekunhonga.Iyi nzira inoshandiswa nemichina yekukohwa nzungumuUnited States.
(1) Danho rokutanga
Mucheki wenzungu anofambiswa netirakita ine mavhiri mana, uye anopedzisamichina yekukohwa nzungukushanda panguva imwe chete kuburikidza nemaitiro ekuparadzanisa mbeu, kuchera, kuputsa ivhu, kuzununguka kwevhu uye kuisa.
Iyo 4H-2 yakakamurwa inokohwa nzungu rudzi rutsva rwemakohwe enzungu inofananidzwa neakawanda anoita basa rekudyara nzungu mulching.Muchina uyu une tarisiro yakanakisa yekusimudzira mukugadzirwa kwazvino, uye inonyanya kuumbwa nefuremu, magetsi ekufambisa system, kukohwa chikamu chedhiraivha, chikamu chekukohwa, firimu rekutyora disc, kudzika kudzika vhiri uye kumiswa mudziyo.
Main michina parameters: inotsigira simba iri 8.8 ~ 13kW diki mana-mavhiri tarakita;kugadzirwa ndeye 1000-1400㎡/awa (mitsetse miviri inounganidzwa panguva imwe chete);chiyero chekurasikirwa chiri pasi kana kuenzana ne1%;ivhu rine nzungu (kuverengwa nehukuru) <5%;Pod breakage rate <1.5%.
Zvinonyanya kukosha: 1. Iyo anti-parallelogram yakaenzana-angle swing mechanism inoshandiswa kubatanidza zvikamu zvekuchera uye zvikamu zvekuparadzanisa zvekucheka peanut.Panguva yekushanda, nzungu dzinotanga kucherwa, uye ipapo ivhu rinozununguka kubvisa ivhu, iro rinoziva kuchera nzungu uye kubviswa kwevhu panguva imwe chete..2. Iyo dhisiki yekupwanya dhisiki inoshandiswa, iyo isingaparadzanise yakakanyiwa mitsara miviri yenzungu yemizambiringa isati yachera nzungu, asiwo inocheka firimu repurasitiki, kuitira kuti firimu repurasitiki ribatanidzwe nemizambiringa yenzungu, uye mizambiringa yenzungu inounganidzwa. panguva yokukohwa, uye hapana chinosara muvhu.membrane.3. Inotungamirirwa ne-antiparallelogram mechanism kuti iwane kuenzana-kona kuzununguka kune rumwe rutivi, kuitira kuti mauto e-lateral anotakurwa nemapuranga aenzane pamwe chete, uye chikwata chinoshanda zvakasimba.4. Zvikamu zvekukohwa zvinotenderera mberi, kupikisa kushanda kuduku, uye kushandiswa kwesimba kwechikwata kunoderedzwa.
(2) Danho rechipiri
Miti yenzungu iri pamusoro inonhongwa, kucheneswa uye kuunganidzwa nemuchina wekunhonga nekukohwa, kana kunhongwa nemaoko nekudyiswa, uye muchina wekunhonga nzungu unopedza basa rekunhonga, kuchenesa nekuunganidza michero.
Muchina wekunhonga nzungu unonyanya kuumbwa nefuremu, vhiri rekuburitsa uswa, roll yekunhonga michero, concave screen, feni yekuchenesa, bhandi rekutakura uye ndiro yekuchinja fan.Mimwe michina yekunhonga michero ine mavhiri ekufamba, ayo akakodzera mashandiro enhare.Muchina uyu unoda kunhongwa nekudyiswa, uyezve muchina wekunhonga nzungu unozopedzisa mabasa ekunhonga, kuchenesa nekunhonga michero.
Iyo Liston 1580 kunhonga nzungu uyekukohwa muchinamuUnited States inotyairwa ne50-60 kilowatt tirakita uye inofambiswa nemagetsi ekubvisa shaft.Kana ichishanda, inogona kunhonga, kunhonga, kuchenesa uye kuunganidza zvirimwa zvenzungu zvakawaridzwa pasi.